Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Vaovao Omicron maika: Johnson & Johnson dia afaka manao Pfizer sy Moderna hahomby kokoa
Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao
Ny Johnson & Johnson COVID-19 Booster, nitantana enim-bolana taorian'ny regime fatra-droa an'ny BNT162b2, dia mampiseho fitomboana be amin'ny valin'ny antibody sy T-cell.
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (ny Orinasa) androany dia nanambara ny valiny savaranonando avy amin'ny fandalinana mahaleo tena, anisan'izany ny ampahany amin'ireo mpandray anjara tamin'ny fandalinana COV2008 tohanan'i Janssen, notarihan'i Dan Barouch, MD, Ph.D., et al. ao amin'ny Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), izay naneho fa ny tifitra fanamafisam-peo amin'ny vaksinin'ny Johnson & Johnson COVID-19 (Ad26.COV2.S), natao tao anatin'ny enim-bolana taorian'ny fitsaboana voalohany amin'ny BNT162b2, dia nampitombo ny antibody roa. ary ny valin'ny sela T. Ireo vokatra ireo dia mampiseho ny tombontsoa azo avy amin'ny fanamafisana heterologous (mix-and-match). Ny lahatsoratra mamaritra ireo valiny ireo dia navoaka tao medRxiv.
"Misy porofo tany am-boalohany milaza fa ny fomba fampifangaroana sy ny fifanandrinana dia mety hanome valin-kafatra hafa ho an'ny olona miady amin'ny COVID-19 noho ny fomba fampiroboroboana homologous," hoy i Dan Barouch, MD, Ph.D., talen'ny Center for Fikarohana momba ny virologie sy vaksiny ao amin'ny BIDMC. "Tao anatin'ity fandalinana savaranonando ity, rehefa nomena ny fatra Ad26.COV2.S ho an'ny olona enim-bolana taorian'ny fitsaboana voalohany tamin'ny vaksiny BNT162b2, dia nisy fitomboana azo oharina tamin'ny valin'ny antibody tamin'ny herinandro fahefatra taorian'ny fampisondrotana sy ny fitomboana bebe kokoa. Valiny CD8+ T-cell miaraka amin'ny Ad26.COV2.S raha ampitahaina amin'ny BNT162b2.
"Ireo valiny ireo dia manome fomba fijery ara-tsiansa manan-danja ho an'ny vaksinintsika rehefa ampiasaina ho mpanentana fifangaroana sy mifanandrify ary afaka manampy amin'ny fampahafantarana ny paikady fampiroboroboana miaraka amin'ny tanjona hanakanana ny areti-mifindra," hoy i Mathai Mammen, MD, Ph.D., Global Head, Janssen Fikarohana & Fampandrosoana, Johnson & Johnson. "Ireo angon-drakitra ireo dia manampy amin'ny fitomboan'ny porofo mampiseho fa ny fatram-pamokarana mifangaro sy mifanandrify amin'ny vaksiny Johnson & Johnson COVID-19 dia mahomby amin'ny fampitomboana ny valinteny mahatsikaiky sy ny valin-kafatra amin'ny sela manohitra ny tadin'ny SARS-CoV-2 tany am-boalohany, ary koa ny variana Beta sy Delta.
Ny angon-drakitra Phase 2 dia nohamafisin'ny valiny mialoha avy amin'ny fandalinana klinika UK COV-BOOST navoaka tao The Lancet, izay nampiseho fa taorian'ny vaksiny voalohany tamin'ny fatra roa BNT162b2 (n=106) na ChAdOx1 nCov-19 (n=108), ny dosie booster an'ny vaksiny Johnson & Johnson COVID-19 dia nampitombo ny valin'ny antibody sy T-cell.
Valin'ny finday (T-Cell).
Amin'ity fanadihadiana savaranonando ity, ny fampisondrotana miaraka amin'ny vaksiny Johnson & Johnson COVID-19 taorian'ny fitondrana vaksiny voalohany an'ny BNT162b2 dia hita fa mitondra fitomboana bebe kokoa amin'ny valin'ny sela T CD8+ noho ny fanamafisana ny BNT162b2. Ireo angon-drakitra valin'ny T-cell ireo dia manome soso-kevitra ny fahasamihafana misy eo amin'ny valin'ny immune taorian'ny fampisondrotana homologous miaraka amin'ny BNT162b2, ary ny fampifangaroana sy ny fifanandrinana miaraka amin'ny vaksinin'ny Johnson & Johnson COVID-19 taorian'ny regime voalohany BNT162b2.
Ny vaksiny Johnson & Johnson COVID-19 dia mampiasa ny AdVac an'i Janssen® teknolojia sy hery fiarovana amin'ny sela, anisan'izany ny valin'ny CD4+ sy CD8+. Ny sela T dia afaka mikendry sy manimba ireo sela voan'ny otrikaretina mahatonga ny COVID-19. Amin'ny ankapobeny, ny CD8+ T-cell dia afaka manimba mivantana ny sela voan'ny aretina ary manampy amin'ny CD4+ T-cells.
Valiny mahatsikaiky (antibody).
Na ny vaksiny Johnson & Johnson COVID-19 sy ny BNT162b2 ho mpanentana dia nitarika ho amin'ny haavo antibiôtika mitovitovy sy mamatotra amin'ny tadin'ny SARS-CoV-2 tany am-boalohany, ary koa ny variana Delta sy Beta, efatra herinandro taorian'ny fampisondrotana. Na izany aza, taorian'ny fatran'ny fampifangaroana ny vaksiny Johnson & Johnson COVID-19, dia nitohy nitombo ny antibody nandritra ny efatra herinandro fara fahakeliny, fa tamin'ny olona nahazo fampivoarana homologous tamin'ny vaksiny BNT162b2, dia nihena ny antibody nanomboka tamin'ny herinandro roa ka hatramin'ny herinandro. efatra post-boost.
Ny antikora tsy miandany dia afaka mamehy ny viriosy amin'ny fomba manakana ny otrikaretina ary mamehy ny otrikaretina amin'ny trakta taovam-pisefoana ambony. Ny antibody mamatotra dia afaka mifatotra amin'ny proteinina spike virus ary manakana ny viriosy amin'ny alàlan'ny fampiasa antiviral tsy manaratsy.
Ho an'ity fandalinana ity, ny biorepository santionany ao amin'ny Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) dia nahazo santionany avy amin'ireo olona nahazo ny vaksiny BNT162b2. Ny mpandray anjara dia nanohy ny fanaraha-maso tao amin'ny biorepository ary nitombo tamin'ny 30 ug BNT162b2 (n = 24) na nisoratra anarana tamin'ny fandalinana COV2008 (NCT04999111) ary nitombo tamin'ny 5, 2.5, na 1 × 10.10 vp an'ny vaksiny Johnson & Johnson COVID-19 (n=41). Ny fandalinana COV2008 dia fitsapana klinika tohanan'i Johnson & Johnson, mitohy, jamba amin'ny dingana 2 (VAC31518COV2008) hanombanana ny vaksiny COVID-19 ho toy ny mpanentana amin'ny olon-dehibe 18 taona no ho miakatra.
Ny Komitin'ny Mpanolotsaina momba ny Fanaraha-maso sy ny fisorohana ny aretina (CDC) amerikana momba ny fanao amin'ny vaksiny (ACIP) dia nanoro hevitra ny vaksinin'i Johnson & Johnson COVID-19 ho mpanentana ho an'ny olona rehetra mendrika 18 taona no ho miakatra izay mahazo vaksiny COVID-19.
Johnson & Johnson dia manohy manolotra angon-drakitra mifandraika amin'ny mpandrindra hafa, ny World Health Organization (WHO) ary ny National Immunization Technical Advisory Groups (NITAGs) maneran-tany mba hampahafantarana ny fanapahan-kevitra momba ny paikady fitantanana vaksiny eo an-toerana, raha ilaina.
Amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo vondrona akademika any Afrika Atsimo sy manerana izao tontolo izao, ny Orinasa dia nanombantombana ny fahombiazan'ny vaksiny COVID-19 amin'ny karazany, anisan'izany ny vaovao sy miparitaka haingana. Omicron variant. Ho fanampin'izay, ny orinasa dia mikatsaka vaksiny variana manokana amin'ny Omicron ary handroso izany araka izay ilaina.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fomba fiasa marobe ataon'ny orinasa amin'ny fanampiana amin'ny ady amin'ny valan'aretina, tsidiho: www.jnj.com/covid-19.
Ny vaksinin'i Johnson & Johnson COVID-19, antsoina koa hoe ny Vaksin'i Janssen COVID-19, dia nahazo alalana hampiasaina amin'ny alàlan'ny fanomezan-dàlana hampiasa vonjy maika (EUA) ho an'ny vaksiny mavitrika hisorohana ny aretina Coronavirus 2019 (COVID-19) vokatry ny taovam-pisefoana mahery vaika. aretina coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
Ny fomba fanaovana vaksiny voalohany ho an'ny Vaksiny Janssen COVID-19 dia fatra tokana (0.5 mL) omena ny olona 18 taona no ho miakatra.
Ny fatran'ny vaksiny Janssen COVID-19 tokana (0.5 mL) dia azo omena 2 volana farafahakeliny aorian'ny fanaovana vaksiny voalohany amin'ny olona 18 taona no ho miakatra.
Ny dosie booster tokana amin'ny Vaksiny Janssen COVID-19 (0.5 mL) dia azo omena ny olona 18 taona no ho miakatra ho toy ny fatra booster heterologous aorian'ny fahavitan'ny vaksiny voalohany miaraka amin'ny vaksiny COVID-19 hafa nankatoavina. Ny elanelam-pamokarana ho an'ny fatra heterologous booster dia mitovy amin'ny nahazoana alalana ho an'ny dosie booster amin'ny vaksiny ampiasaina amin'ny vaksiny voalohany.
lazao amin'ny mpamatsy vaksiny momba ny toe-pahasalamanao rehetra, ao anatin'izany ny hoe:
manana aretim-dra na miha mahia
immunocompromised na eo amin'ny fanafody izay misy fiantraikany amin'ny rafi-kery fanefitrao
bevohoka na mikasa ny ho bevohoka
nahazo vaksinin'ny COVID-19 hafa
efa torana tsy tapaka niaraka tamin'ny tsindrona
dia nisy fiatraikany mahery vaika taorian'ny fatra teo aloha tamin'ity vaksininy ity
nanana fihetseham-po mahazaka mafy amin'ny akora rehetra amin'ity vaksiny ity.
Vaksina voalohany: Ny vaksinin'i Janssen COVID-19 dia atao amin'ny fatra tokana.
Ny fatra iray booster amin'ny Vaksiny Janssen COVID-19 dia azo omena roa volana farafahakeliny aorian'ny fanaovana vaksiny voalohany amin'ny Vaksiny Janssen COVID-19.
Ny fatra fanamafisam-peo tokana amin'ny Vaksiny Janssen COVID-19 dia azo omena ny olona 18 taona no ho miakatra izay nahavita vaksiny voalohany tamin'ny vaksiny COVID-19 hafa nahazoana alalana na nekena. Azafady, miresaha amin'ny mpitsabo anao momba ny fotoanan'ny dosie booster.
Fihetseham-po amin'ny toerana misy tsindrona: fanaintainana, mena ny hoditra, ary mamontsina.
Ny voka-dratsiny ankapobeny: aretin'andoha, reraka be, aretin'ny hozatra, maloiloy, tazo.
Fehin-kibo lymph nivonto.
Fihetseham-po tsy mahazatra eo amin'ny hoditra (toy ny fihetsehana na fahatsapana mandady) (paresthesia), fihenan'ny fahatsapana na fahatsapana, indrindra amin'ny hoditra (hypoesthesia).
Mampaneno mafy ny sofina (tinnitus).
Fivontosana ny tavanao sy ny tendanao
Fitempon'ny fo haingana
Maimaika ratsy manerana ny vatanao
Fanina sy fahalemena
Fanaintainana kibo maharitra,
aretin'andoha mafy na maharitra na manjavozavo ny fahitana,
Mora mangana na tasy kely ao ambanin'ny hoditra any ivelan'ny toerana nanaovana ny tsindrona.
Ny fahalemena na ny fihetsehana, indrindra amin'ny tongotra na ny sandry, izay miharatsy sy miparitaka any amin'ny faritra hafa amin'ny vatana.
Sarotra amin'ny fihetsehan'ny tarehy, anisan'izany ny miteny, mitsako, na mitelina.
Fahitana indroa na tsy fahafahana mihetsika maso.
Sarotra amin'ny fifehezana ny tatavia na ny fiasan'ny tsinay.
Thomas Lasy hoy:
Desambra 9, 2021 amin'ny 06:09
Ity vokatra ity dia azo antoka fa manana fampitandremana sy fanehoan-kevitra ratsy. Saika azo antoka toa an'i Alex Baldwin amin'ny sarimihetsika. Tena maniry aho ny hampitsahatra ireo vaksiny ireo ary hahita biolojika tena izy, azo antoka, mahomby izay mitsabo ny viriosy na otrikaretina rehetra satria mbola hisy fitaovam-piadiana biolojika bebe kokoa.